Gantaal lagu soo weeraray magaalada barakeysan ee Makka Al-mukarama oo lasoo riday – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Gantaal lagu soo weeraray magaalada barakeysan ee Makka Al-mukarama oo lasoo riday
Maleeshiyada Xuutiyiinta Yemen ayaa maalintii Khamiista ahayd gantaal noociisu yahay kuwa ridada dheer ee Balaastikadda kusoo weerartay dhinaca magaalada barakeysan ee Makka Al-mukarama ee dalka Sucuudiga.
Dowladda Sucuudiga ayaa la sheegay inay gantaalkaasi ka hortagtay islamarkaana soo riday kahor inta uusan soo gaarin magaalada barakeeysan ee Makka Al-mukarama.
Magaalada Makka Al-mukarama ayaa waxaa ku yaalla goobaha ugu muhiimsan Islaamka, sida masjidka weyn ee Xaramka, Kacbada barakeysan iyo goobo badan oo lagu cibaadeysto.
Wakaaladda wararka ee dalka Sacuudiga ayaa goor sii horeeysay baahisay in gantaalkaasi ay soo rideen Sucuudiga uu kusoo dhacay deegaanka Wasaliyah ee gobalka Daa’if oo qiyaastii 69km u jira magaalada barakeysan ee Makka Al-mukarama.
Dowladda Sucuudiga ayaa sheegtay in maleeyshiyada shiicada Yemen ee Xuutiyiinta ay doonayaan inay qalqal ku geliyaan howlaha ka socdo Xajka, iyadoo xujeydii ugu horeeysay oo ka socota dalka Pakistan ay bilaabeen inay tagaan dalkaasi Sucuudiga.
Dhinaca kale, maleeshiyada Xuutiyiinta ayaa beeniyay inay iyaga soo tuureen gantaalkaasi noociisu yahay kuwa ridada dheer ee Balaastikadda ah, balse waxay qirteen in sanadkii hore ay rideen gantaal noociisu yahay kuwa ridada dheer ee Balaastikadda ah oo ay ugu magac dareen “Barkaan One”.
Gantaalkaasi ayay ku sheegeen inuu hadafkiisu ahaa garoonka diyaaradaha caalamiga ee boqor C/casiis ee ku yaalla magaalada Jeddah oo qiyaastii 100-km u jirta magaalada Makka Al-mukarama ee dalka Sucuudiga.